ESI LELEE KAADỊ VIDIYO MAKA ARỤMỌRỤ - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Ịzụta kaadị vidiyo ọhụrụ (na ikekwe kọmputa ọhụrụ ma ọ bụ laptọọpụ) ọ bụghị ihe ọ bụla iji mee nnyocha nke a na-akpọ nrụgide (lelee kaadị vidiyo maka operability n'okpuru ọrụ dị ogologo). Ọ ga-abụkwa ihe bara uru ịchụpụ kaadị vidiyo "ochie" (karịsịa ma ọ bụrụ na i wepụ ya n'aka onye na-amaghị ama).
Na obere edemede a, m ga-achọ ịgafe nzọụkwụ iji nyochaa otu esi elele kaadị vidiyo maka arụmọrụ, n'otu oge na-aza ajụjụ ndị kachasị na-ebili n'oge ule a. Ya mere, ka anyi malite ...
1. Ịhọrọ usoro maka ule, nke ka mma?
Na netwọk ugbu a, e nwere ọtụtụ usoro dị iche iche iji nwalee kaadị vidiyo. Otu n'ime ha bụ ndị a ma ama na-ekwusara, dịka ọmụmaatụ: FurMark, OCCT, 3D Mak. Na ihe omuma atu di n'okpuru, ekpebiri m ịkwụsị na FurMark ...
Adreesị weebụ: http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma (n'echiche m) maka ule na ule kaadị vidiyo. Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume ịnwale maadị AMD (ATI RADEON) na NVIDIA; kọmputa nkịtị na kọmpụta.
Site n'ụzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ihe eji ederede ọ bụla (ọ dịkarịa ala, ezutebeghị m na ọrụ ahụ agaghị arụ ọrụ). FurMark na-arụkwa ọrụ niile nke Windows: XP, 7, 8.
2. Ọ nwere ike ịtụle arụmọrụ nke kaadị vidiyo n'enweghị ule?
Nkebi ee. Lezienụ anya n'otú kọmputa si akpa àgwà mgbe agbanyere ya: ọ ga-abụrịrị "ụda" (ihe a na-akpọ squeals).
Naanị lelee àgwà nke eserese na nyocha. Ọ bụrụ na ihe na-ezighị ezi na kaadị vidiyo ahụ, ị ​​ga-ahụrịrị ụfọdụ ntụpọ: agbụ, ụja, mgbagha. Iji mee ka nke a dokwuo anya: lee ihe atụ ole na ole n'okpuru.
HP akwụkwọ ntanetị - mwube na ihuenyo.
Nkịtị PC - oghere na-ahụ anya na ripples ...
Ọ dị mkpa! Ọbụna ma ọ bụrụ na foto ahụ dị na ihuenyo dị elu ma na-enweghị ntụpọ, ọ gaghị ekwe omume ikwubi na ihe niile dị na kaadị vidiyo. Naanị mgbe ọ bụrụ "ezigbo" nbudata na kachasị (egwu, ule nrụgide, vidiyo HD, wdg), ọ ga-ekwe omume ime nkwubi okwu yiri ya.
3. Olee otu esi eme ka ihe nlekọta ule vidio iji chọpụta arụmọrụ ahụ?
Dị ka m kwuru n'elu, na m ihe atụ m ga-eji FurMark. Mgbe ị wụnye ma na-arụ ọrụ ahụ, windo ga-apụta n'ihu gị, dị ka na nseta ihuenyo n'okpuru.
Site n'ụzọ, ṅaa ntị ma ma ọ bụ ọrụ ahụ na-egosi n'ụzọ ziri ezi ihe nlereanya nke kaadị vidiyo gị (na nseta ihuenyo n'okpuru - NVIDIA GeForce GT440).
A ga-eduzi ule maka kaadị vidiyo NVIDIA GeForce GT440
Mgbe ahụ ị nwere ike ịmalite nyocha ozugbo (ntọala ndabara zuru oke ma ọ dịghị mkpa ịgbanwe ihe ọ bụla). Pịa na bọtịnụ "Burn-in test".
FuMark ga - adọ gị aka ná ntị na ule dị otú a dị nnọọ njọ maka kaadị vidiyo ma ọ nwere ike iwe ọkụ (site na ụzọ, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu n'elu 80-85 oz.) - na kọmputa nwere ike ịmaliteghachi, ma ọ bụ mgbagha nke foto ahụ na ihuenyo).
Site n'ụzọ, ụfọdụ ndị na-akpọ FuMark na-egbu ndịadị "adịghị ike" video. Ọ bụrụ na kaadị vidiyo gị adịghị mma - mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume na mgbe nyocha ndị dị otú ahụ ga-ada!
Mgbe ịpị "Gaa!" ga-agba ọsọ ahụ. A "bagel" ga-apụta na ihuenyo, nke ga-agbanye n'ọtụtụ ụzọ. Nnwale dị otú ahụ na-ebu kaadị vidiyo karịa ihe ọ bụla mejiri egwuregwu ọhụrụ!
N'oge ule ahụ, emela ihe omume ọ bụla. Naanị lelee okpomọkụ ahụ, nke ga-amalite na-ebili site na nke mbụ nke mbido ... Oge ule bụ nkeji 10-20.
4. Olee otu esi atụle nlele ndị a?
N'okwu, ọ bụrụ na ihe na-ezighị ezi na kaadị vidiyo - ị ga-ahụ ya na nkeji mbụ nke ule ahụ: ma foto nke dị na nyocha ahụ ga-aga na ntụpọ, ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ ga-arịgo elu, na ị gaghị ahụ oke ọ bụla ...
Mgbe minit 10-20 gasịrị, ị nwere ike ịchọta nkwubi okwu:
Ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo ekwesịghị ịfe 80 gram. C. (dabere, n'ezie, na ihe nlereanya nke kaadị vidiyo ahụ ma ... Ọdịdị dị oké njọ nke ọtụtụ vidiyo vidio Nvidia bụ 95+ gr. C.). Maka laptọọpụ, ekwuru m maka okpomọkụ na isiokwu a:
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na esemokwu okpomọkụ ga-aga na semicircle: i. nke mbụ, ịrị elu dị elu, wee rute oke ya - dịka otu akara ogologo.
Igwe ọkụ dị elu nke kaadị vidiyo nwere ike ikwu okwu ọ bụghị nanị maka ịdapụsị nke usoro jụrụ oyi, kamakwa banyere nnukwu ájá na mkpa iji dozie ya. N'elu okpomọkụ, ọ bụ ihe na-achọsi ike ịkwụsị ule ahụ ma lelee usoro usoro, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kpochapụ ya n'ájá (ihe gbasara nhicha:
N'oge ule ahụ, foto dị na nyocha ahụ ekwesịghị ịgbawa, gbanwee, wdg.
Okwesighi igbasa njehie dị ka: "Onye na-ese vidiyo akwụsịghị ịzaghachi ma kwụsị ...".
N'ezie, ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu ọ bụla na usoro ndị a, mgbe ahụ, ịchọrọ kaadị vidiyo dị ka ọrụ!
Site n'ụzọ, ụzọ kachasị mfe iji chọpụta kaadị vidiyo bụ ịmalite egwuregwu (ọkacha mma ọhụrụ, karịa oge a) ma kpọọ oge ole na ole na ya. Ọ bụrụ na foto dị na ihuenyo dị nkịtị, enweghị njehie na ọdịda, mgbe ahụ, kaadị vidiyo dị nnọọ ịtụkwasị obi.
Na nke a, enwere m ihe niile, ezigbo ule ...